Kallattiiwwanii fi maniiwwan gurguddoo karoora bara 2006
Barnootaa fi Eegumsa Fayyaa ilaalchisee
Kaayyoon Karoora bara 2006, hojiiwwan baroota KGT sadan darban keessatti harc’anii hafan kallattii hundaan duguuganii hojiiwwan bara 2006f qabaman waliin raawwachuudhaan dhuma bara bajatichaatti guddina dinagdee naannoo keenyaa yoo xiqqaate %11.5 galmeessisuudha. Kanarraayis, ummanni naannoo keenyaa fayyadamaa misooma dinagdee, hawaasummaa fi bulchiinsa gaarii akka ta’u gochuudha.
Bu’uura kanaan, wal-gahiin idilee 9ffaa Caffee Oromiyaa kan waggaa 3ffaa bara hojii Caffee 4ffaa , kallattiiwwanii fi maniiwwan gurguddoo karoora bara 2006 kaa’eera. Maxxansa darbe /Lak. 506/n kallattii misooma dinagdee dhiyeessinee ture. Maxxansa kanaan / Lak. 507/n ammoo, kallattii sektara barnootaa fi eegumsa fayyaa dhiyeessina
Kallattii misooma barnootaa
Hojii misooma barnoota keessatti xiyyeeffannaan guddaan qulqullina barnootaa fooyyessuu yoo ta’u, uwwisa guddisuu keessatti naannoo horsiisee bulaa irratti xiyyeeffachuun kan hojjatamu ta’a. Tajaajila barnoota bu’uuraa lammii hundaa waliin gahuun galma misooma barkumee gama barnootaan kaa’ame fiixaan baasuuf hojiin jalqabamee jiru cimee kan itti fufu ta’a. Tajaajilicha qaqqabamaa taasisuuf bara 2006 keessa dhaabbileen barnootaa sadarkaa hundaayyuu kan babal’atan yommuu ta’u, manneen barnootaa Sad. 1ffaa 12,559, sad.2ffaa 571 fi qophaa’ina 231 irraan gahuuf ni hojjatama.
Carraa barnoota ilaalchisee, barnootni idilee duraa, barnoota fedhii addaa fi barnootni filannoo addaa qulqullina barnootaa fi uwwisa fooyyessuu keessatti gumaacha guddaa waan qabaniif bara 2006 keessa akkaataa jijjiramni bu’uuraa dhufutti ni hojjatama. Akkasumas, hawaasa baratee teeknolojii ammayyaaa fayyadamuun jireenya ofii jijjiiru horachuuf barnootni ga’eessotaa gocha irratti xiyyeeffate ga’eessota mil. 4.5 ta’aniif ni kennama.
Haaluma walfakkaatuun, daa’imman umuriin barnootaaf gahe mil. 1.17 ol ta’an kutaa 1ffaatti kan simataman yoo ta’u, waliigala sad. 1ffaa (1-8) barnoota filannoo addaa dabalatee barattoota mil. 7.3; sad.2ffaa barattoota kuma 760.7 fi qophaa’inatti kuma 129.5 simachuuf karoorfameera. Qulqullina barnootaa naannoo keenyaa foyyeessuun lammii gahumsa qabuu fi dorgomaa ta’e oomishuuf paakeejii mirkaneeffannaa qulqullina barnootaa sagantaalee jaha qabu guutummaa guutuutti hojiirra oolchuu fi tarsiimoo muuxannoo gaarii babal’isuu manneen barnootaa hunda keessatti akka hojiirra oolu ni taasifama.
Gama biraatiin, walgitiinsa carraa barnootaa fooyyessuuf hirmaannaa barnoota shamarranii fi barnoota naannoo horsiisee bulaatiif xiyyeffannaa kennuun ni hojjetama.
Gahumsa barnootaa fooyyeessuu ilaalchisee, bara 2006tti haftee fi irra deebii barattootaa xiqqeessuf qiidoomina raayyaa misooma barnootaa, maatii barattootaa fi qooda fudhattootaa cimsuun tarsiimoon harcaatii xiqqeessuu akka hojiirra oolu ni taasifama. Gama biraatiin, gahumsa barattootaa gama barumsaatiin jiru guddisuun qabxii daree keessaas ta’ee reetiin darbiinsa qormaata biyyoolessaa (kutaa 8ffaa, 10ffaa fi 12ffaa) akka dabalu ciminaan ni hojjatama. Akka waliigalaatti, galama karoora 2006 fi KGT akka milkaa’u gochuuf humna raawwachiisummaa cimsuun, raayyaa misooma barnootaa lafa qabsiisuun ergamasaa akka bahu taasisuuf Tarsiimoo Muuxannoo Gaarii Babal’isuu-paakeejii Mirkaneeffannaa Qulqullina Barnootaa hojii irra oolchuun hojii irratti xiyyeeffatamee hojjatamuudha.
Kallatti misooma eegumsa fayyaa
Eegumsa fayyaa ilaalchisee, hawwasa fayyaa qabeessa horachuun galma gahiinsa karoora guddinaa fi tiraansiformeeshiniif akka gumaachu taasisuuf paakeejii ekisteenshinii fayyaa hojiirra oolchuun dhibeewwan daddarboo harka 80 ol ta’an ittisuun yeroo kamiyyuu caalaa bara kana xiyyeeffannaan kan hojjetamu ta’a.
Gama biraatiin, raayyaa misooma baadiyyaa, raayyaa jijjiirama sivil sarvisii fi rayyaa misooma dame dubartootaa sadarkaa naannootii kaasee hanga gandaatti ijaaruu, cimsuu fi raayyaa kanattis fayyadamuudhaan humna raawwachiisummaa cimsuun tarsiimoo muxxannoo gaggaarii babal’isuu paakeejii ekisteenshinii fayyaa hojiirra akka ooluu gochuun bara itti aanuus dhimma xiyyeeffannoo addaa barbaadudha.
Du’aatii haadhoolee da’umsaan walqabatee jiru hir’isuu ilaalchisee, dubartootni yeroo ciniinsuun qabu atattamaan gara dhaabbilee fayyaatti fiduun murteessaa dha. Kuniis hojii oggeessa fayyaa qofaan hojjatamu osoo hin ta’iin, jaarmiyaalee dubartootaa cimsuun, rayyaan misooma baadiyaa fi raayyaan dame dubartootaa cimee hawaasa sosochoosuun hubannoo isaanii cimsee dubartoonni tajaajila kannatti akka fayyadaman gochuuf gaggeessaan sadarkaa sadarkaan jiruu fi qaamni dhimmi ilaallatu hundi karoora bara 2006 keessatti xiyyeeffanoodhaan irratti hojjechuun murteessaa dha.
Gama dhiyeessiitiinis, dhaabbilee fayyaa meeshaalee, qorichaa fi humna namaa akkasumas, bu’uraale misoomaa kan akka bishaanii fi ibsaatiin guutuu fi rifoormiiwwan sektarichaa hojiirra oolchuudhaan hawaasni tajaajila fayyaa qulqullinaa fi saffina qabu akka argatu gochuuf xiyyeeffannaan hojjetama. Bifa walfakkaatuun, hojiirraa oolmaa inshuraansii hawaasaa waggoota darban bifa shaakalliitiin aanaalee 4 keessatti hojiirra oolchuun bu’aa qabeessummaan isaanii mirkanaa’e bara itti aanu kanatti gara aanaalee 64tti ol guddisuuf sochiin jalqabame haala qindoomina qabuun kan itti fufu ta’a.
Uwwisa tajaajila fayyaa bu’uuraa bara 2005tti %94 ture gara %96tti akka guddatuu, uwwisa keellaa fayyaa %100n ga’uu fi baay’ina buufataalee fayyaa bara 2005tti 1,104 ture gara 1,215tti akka guddatan ni taasifama. Uwwisa tajaajila karoora maatiis %63 irraa gara %75tti akka guddatu, tajaajila da’umsaa ogeessota fayyaatiin dhaabbilee fayyaa keessatti kennamuu kan 2005tti %38 irra ture gara %60tti akka guddatuuf xiyyeeffannaan ni hojjetama. Hojiin ijaarsa Pirojeektoota dhaabbilee fayyaa haala karoorfameen qulqullinaa fi yeroo isaa eegatee akka xumuramu gochuun dhimma xiyyeeffannaa addaa barbaaduudha.
Kallattiiwwan kana milkeessuu keessatti qindoominni humnoota misoomaa sadanii maal ta’uu qaba? Kutannaan, xiiqii fi aantummaan ummataa gaggeessaa, ogeessaa fi miseensa sadarkaa sadarkaan jiru keessatti uumamuu qabu hoo?